समयको बचत गर्नु भनेकाे खुत्रुकेमा घडी राख्नु हैन - Darsan Post
२ बैशाख २०७८, बिहीबार २०:४८ Dpost127LeaveaComment on समयको बचत गर्नु भनेकाे खुत्रुकेमा घडी राख्नु हैन
अनुप घिमिरे । जिन्दगीको सबैभन्दा महत्त्वपुर्ण साथि समय हो । हामिलाइ जन्म देखि आज सम्म जे कुरा सिक्ने मौका मिल्यो त्यो सबै समय कै कारण हो । सोच्नुस त हाम्रो जिन्दगीमा सबै कुरा चाहेर जतन गर्न सक्छौ तर समय कदापी सकिँदैन । हिजोलाई थाती राखेर भोलिको सपना देख्न त सकिँदैन नि हैन । फेरि हामी सोच्न त समयको बचत गर्नुपर्छ सोच्छौ तर बचत हैन सदुपयोग गर्नु उत्तम हो समयको सोचेको कुरा पाउनु र पाएको कुरामा सोच्नु त फरक कुरा हाे । समयको उचित प्रयोगले मानिसको जिन्दगी सदा अविस्मरणीय बनाउछ ।
हामिलाइ सधै युवा हुन मन हुन्छ । हुन पनी युवा उमेरमा हाम्रा प्रगती राम्रा नै मानिन्छ तर युवा उमेर बचत गर्नुपर्छ सधै युवा हुनुपर्छ भनेर घडी खुत्रुकेमा हाल्नु पनि त मिलेन ।
खास मानिसको जिन्दगी मलामी कमाउन मात्र निर्धारण भयको हुन्छ । बाचुन्जेल कहिले मर्छ भनेर दिन गन्ने हरु पनि हुन्छन । हाम्रो जिन्दगीमा तपाईंको मृत्युको दिन जम्मा भएका मलामीको आधारमा तपाईं असल र खराब छुट्याइन्छ । त्यसैले बाचुन्जेल सबैलाइ राम्रो गर्नुपर्दछ । खास कुनैपनी कुराको निछोडमा राम्रो ज्ञान मिल्दछ तर हामिलाइ अन्त्य सम्म कुर्न गाह्रो हुन्छ । सोच्नुस त हामी नम्र भयर बोल्दा कति राम्रा कुरा सिकिन्छ । हाम्रो जिन्दगी त हरेर सेकन्ड केही नयाँ कुरा सिक्न कै लागि त तय भयको हो । हामिले घर छोडेर टाढा बसेर पैसा कमाउनु हाम्रो जिन्दगी राम्रो भयको हैन । हामिले बटुलेको अनुभवले हाम्रो स्थान तय गर्ने हो ।
समय त धेरै प्रभाबशली छ । हिजो हामी कुनै कुराको ज्ञान लिन धेरै समय खर्च गर्नु पर्थ्यो र त हामिलाइ त्यो जीवन राम्रो लाग्थ्यो अनुभव खारिन्थ्यो तर आज हाम्रो लोकप्रियता सस्तो छ । हामी छोटो समयमा लोकप्रिय बन्छौ अनि छोटै समयमा बिलिन पनि तर हामिलाइ महङ्गो र लामोसमयको लोकप्रियता चाहियको छ । हामी समय बचत गर्न सक्छौ सोच्नुस त कुनै अनाथ बच्चालाई सहयोग गर्नुस दुखीलाई सहयोग गर्नुस । भोलि हामिले अशक्त हुदा उस्ले हामिलाइ सहयोग गर्छ । यो भन्दा फेरि सबै कुरा फिर्ता पाउने आशामा कसैलाइ सहयोग नगर्नुस । हामी जस्को मलामी जान्छौ नि उ हाम्रो मलामी आउन सक्दैन । यो त उस्ले हामिलाइ कमाएको हो । हाम्रो माया पाएको हो । सन्सारमा राम्रो तबरले बिचार गर्ने हो भने कसैलाइ गरेको मायाले नयाँ अनुभव दिन्छ तर कसैलाइ दियको माया ले सबै अनुभव निखार्न नि सक्छ । त्यसैले असल समयको बचत गर्न सिक्नुस ।
रिस, राघ र घृणा किन गर्छौ हामी । किनकि हामिमा ज्ञानको कमि छ । जो मानिसमा पुर्ण ज्ञान छ उ रिसायको देख्नुभएको छ? हामिलाइ त डाह लाग्छ कि उ हामि भन्दा माथी पुग्ला र मेरो भन्दा प्रगती गर्ला । उसलाइ कसरी तल पार्ने त्यतिमै हाम्रो समय खर्च भयको छ । सोच्नुस त असल बिचारमा लगाएको समय हामिले बचत गरेको समय हैन र हामिले भोलि त्यही असल कार्यको फल त प्राप्त गर्ने त हो ।
समयको बचत गरेर असलताको परिभाषा अझै प्रघाढ बनाउ त हाम्रो उचाई त पक्कै चुलिन्छ । उ कस्तो असल छ आहा यो शब्दलाई सधै सुन्न पाउनु हाम्रो खुसी कति हुन्छ । सोच्नुस त आफ्नो मपाइ हैन अरु को तपाईं बन्न सिक्नुस न अनि पो हाम्रो परिचय सदा रहन्छ ।
बालबालिकामा मोबाइल लत
१५ माघ २०७६, बुधबार १३:३६
के हो श्रीमती?
२५ माघ २०७६, शनिबार २०:०६
बूढो वर–पीपलको आलाप
१५ माघ २०७६, बुधबार १३:३८